O mepụtara "mmiri mmiri ozuzo siri ike" site na usoro nke nwere ike ịgbanwe ndọpụ ọrụ ugbo - Afrikhepri Fondation
O meputara “mmiri mmiri zoro ezo” site na usoro nke ghagbanwe ugbo
Sergio Rico, onye injinia Mexico, bụ onye mepụtara mmiri ozuzo siri ike, usoro dị mfe nke nwere ike ịgbanwe ọrụ ugbo. Teknụzụ a bụ akụkụ nke ịgba mmiri. Ọ mejupụtara n’ichepụta ojiji mmiri mmiri na-ezo. Kemgbe afọ iri, Mexico ụnwụ nri dị egwu na ugwu nke mba ahụ. Sergio Rico, maara nsogbu nsogbu ịda ogbenye, ụnwụ nri na ịkwaga, chọrọ ụzọ iji mee ka mmiri na-ezo nke ọma ka na-adabara na mpaghara ndị a kpọrọ nkụ.
“Site n’ịrụ ọrụ ịgbake mmiri mmiri, Sergio Rico kwuru na Point.fr, anyị achọpụtala ụzọ iji mee ka ọ dịkwuo mma iji nye ya uru ọzọ. Emere m ka mmuo nwa nke na-a liquidụ mmiri n’obere m, ọ bụ n’ebe ahụ ka m nwere echiche ịgbanwe mmiri mmiri ozuzo site n’idebe ya n’ụdị. ihe dị n'ime ala nke na-anabata ihe nke ukwuu, nke akparamagwa ya bụ ịchekwa oke ibu ya na mmiri ugboro 500, na-agbanwezigharị usoro mmiri ya. ”
A na-agbanye mmiri mmiri ozuzo, anakọtara site n'elu ụlọ, n'ime sọma n'ime mmiri zuru ezu iji wụsa otu iko 1,5 nke potassium polyacrylate 1 mmiri. N'ime nkeji iri na ise, anyị na-agba àmà usoro nhazi mmiri. Mgbe ahụ, ọgbaghara dị na olili ozu na - eme, nke na - eme ka ụmụ irighiri mmiri ahụ rapara n'ahụ ndị na - eme polymer, nke na - enye nnukwu mmiri na ọnọdụ siri ike. Site na usoro a, ọ dịghị mkpa nfuli, ọkpọkọ, ike eletrik, ndị na-ebu mmiri iji buru mmiri ahụ. Enwere ike itinye mmiri ahụ siri ike n'ime akpa rọba nwere ike ịchekwa ngwa ngwa ruo mgbe achọrọ.
Osisi anaghị enwe nrụgide
Potassium polyacrylate na-enye gị ohere ị gelụ mmiri gel ma fesa ha ugboro ole ịchọrọ ka afọ asatọ ruo iri. Ọ bụ ụdị ntụ ntụ ọcha dị ka shuga. Maka ngwakọta a, onye na-ahụ maka ọgwụ Mexico, onye maara obodo ya nke ọma, na-eji dị ka otu nke ịlele Capsule nke karama ọ bụla nke carbonated ọ drinkụ carbonụ, n'ihi na ọ maara na ndị mmadụ na -ewe ọdọ mmiri ma ọ bụ obere ime obodo ebe a na-elebara mkpa a anya. teknụzụ enweghị nguzozi ziri ezi iji tụọ gram 1,60 nke polyacrylate.
Ihe atụ zuru oke iji mechie ọnụ bụ, dịka ọmụmaatụ, dose dị mkpa iji mee ka mmiri nke osisi tomato dị 25 chọrọ. Maka olulu ọka, akpa kilo 1 nwere ike ịgba mmiri mmiri banyere hectare 45. Iji gosipụta ntụkwasị obi nke ihe okike ya, Sergio Rico tụnyere steeti Sonora, ebe temometa na-agbago elu karịa ogo 600, usoro ịgba mmiri abụọ. Site na usoro ọdịnala, ebe onye ọrụ ubi na-echere oge mmiri iji nyere mmiri ya, mkpụrụ ya na-enweta 10 kilogram ọka kwa hectare. N’ubi ọzọ, otu mmiri ahụ nke nwere mmiri ozuzo siri ike mere ka e nwee ihe ubi ruru tọn ton XNUMX na hectare!
Usoro ịgba mmiri a, n'adịghị ka ndị ọzọ dị ka ifesa ma ọ bụ mmịda mmiri, bụ naanị nke na-eji mmiri siri ike. Nsonaazụ a dị ịtụnanya, dịka a na-eme ka ihe ọkụkụ na-eme ka ọ dị mmiri mmiri ruo ọtụtụ ọnwa ma na-egbu mmiri mgbe ọ bụla ịsa mmiri ma ọ bụ obere mmiri. Osisi a, n'aka nke ọzọ, anaghị enwe nrụgide, maka na ọ ma na ọ nwere ike ịgụta oke oke mmiri ọ chọrọ na enweghị asacha ọ bụla, n'ihi na mmiri siri ike anaghị s ọ dịghị abanye n'ụwa ma ọ bụ mmiri. Na tebụl ya, Sergio Rico gosipụtara anyị ahịhịa mara mma nke ahịhịa na-edebeghị mmiri ruo ụbọchị 176.
Ọ dịghị onye amụma dị n’obodo nke ya
Sergio Rico na-emeziwanye usoro ya ruo afọ ise. O tinyela akwụkwọ ikike zuru ụwa ọnụ n'okpuru aha "Silos de Agua". Ejirilarị usoro ya n'ụzọ gara nke ọma India maka nkpuru, ahuekere, owu, ọka na nkpuru ogwu. Site na iji usoro ọdịnala, ihe ọkụkụ ndị a chọrọ ịgba mmiri nke 80 lita mmiri kwa izu, site na iji mmiri siri ike, ọ na-ewe lita 50 kwa ọnwa atọ. Otu ihe ịga nke ọma na Colombia, na Ecuador, Spain na Portugal ebe eji arụ ọrụ ya maka ịkọ ahịhịa ma ọ bụ na mmeghari ahịhịa. Ndi oru ugbo, ndi maara onu ahia a ka bu ihe kachasi nma, nihi na ha na ahu anya ego ha gha eme iji zute ahia anyi. ” Silos de Agua adịghị ọnụ ebe ọ bụ na akpa 25 kilogram maka otu hectare na-akwụ naanị narị euro anọ ma na-anọ afọ 400.
Uru ọzọ bụ na mmiri siri ike na-ebugharị ngwa ngwa, nke bara uru maka ebe siri ike ịnweta, ma ọ bụ na inyinya ibu ma ọ bụ na helikọpta. Nnukwu ụlọ ọrụ ọrụ ugbo na Mexico na-eji nkà na ụzụ ọhụrụ a eme ihe ma na-enwewanye mmiri dị ike ma ọ bụrụ na mmiri ezochie tupu owuwe ihe ubi. Ọ bụkwa ezigbo ngwaahịa iji kwụsị ọkụ. Site n’itinye akpa nke mmiri siri ike n’elu ala, ọkụ na-enweta oke mmiri nke anaghị agbapụta, ha na-egbu onwe ha n’enweghi ihe ndu nke ndi oku n’agha.
Nrọ Sergio Rico ga-eme n'ezie ikwenye Minista Ọrụ Ugbo nke Mexico ịmalite ihe ọmụma na enyemaka enyemaka teknụzụ iji kwe ka mpaghara ndị mgbanwe ihu igwe kachasị emetụta iji bulie ojiji a. mmiri ozuzo. Ọ ga-achọ ịhụ na teknụzụ ya na ọrụ nke ndị ogbenye dara ogbenye na Mexico. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-anakọta naanị otuto, diplọma na okwu ọma. Ndi ulo oru Stockholm International Water Institute hoputara maka World Water Prize na 2011, Silos de Agua nwere olile anya inweta nkwụ n’aho 2012. Nke a ga - abu ihe nkwalite dị mkpa maka ngwa ụwa niile.
Atiya gburugburu ebe obibi
Worms nke Pythagoras - Antoine Fabre-d'Olivet (PDF)
General History of Africa (Mpịakọta 1)
Ejiri usoro ya n'ụzọ gara nke ọma na India maka mkpụrụ, ahụekere, nkochi ọka, ọka na nkwụ.